Sinnaanta Helitaanka Tallaalka oo ay la socdaan Geesiyaasha Dalxiiska Adduunka ee Mas'uulka ka ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Sinnaanta Helitaanka Tallaalka oo ay la socdaan Geesiyaasha Dalxiiska Adduunka ee Mas'uulka ka ah
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Jamaica News Breaking • News • Sacuudi Carabiya Warka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wtn
Sinnaan la'aanta helitaanka tallaalka COVID-19 waxay caqabad ku noqon kartaa horumarka dhaqaalaha ee dhammaan qaybaha. Sacuudi Carabiya iyo Hoggaamiyayaasha Dalxiiska Adduunka ayaa tan fahmaya. FII wuxuu soo socdaa toddobaadka soo socda, indhaha adduunkuna waxay ku jeedaan Riyaad.
Mustaqbalka Hindisaha Maalgashiga (FII) wuxuu ku dhow yahay inuu ku kulmo Riyadh. Dalxiiska ayaa markan qayb weyn ku yeelan doona dooda hogaamiyayaasha dalxiiska caalamka.
The Shabakada Dalxiiska Adduunka Hindisaha Caafimaadka ee aan Xudduudda Lahayn wuxuu xusuusinayaa Sacuudi Carabiya iyo wufuuddeeda ka kala socota daafaha dunida in dalxiisku aanu shaqayn doonin illaa aan dhammaanteen ammaan ka helno.
Helitaanka tallaalka looma sinna adduunka. Iyadoo qaar ka mid ah waddamada hodanka ah ay haystaan ​​tallaallo aad u badan, haddana waddamada aan nasiibka u lahayn ayaa aad ugu baahan inay muwaadiniintooda tallaalaan. Barwaaqada beenta badan ee safarka iyo dalxiiska.
Laga bilaabo Oktoobar 17, gudaha Mareykanka, 65% dadweynaha ayaa qaatay ugu yaraan 1 tallaal oo ah tallaalka COVID-19, qaar ayaa hadda qaata tallaalka xoojiyaha 3aad.
30% dadka Mareykanka ayaa diida in la tallaalo. Dawladdu waxay dhiirrigelin u fidineysaa kuwa u hoggaansamaya tallaalka “talo -bixinta” isla markaasna u hanjabaysa kuwa aan u hoggaansami doonin ciqaabta, sida shaqooyinka oo luma ama gala makhaayadaha.
Dalka Singapore, heerka tallaalka waa 80%, Shiinaha 76%, Japan 76%, Jarmalka 68%oo ay dad badani diidan yihiin, Sacuudi Carabiya 68%, UAE 95%, Israel 71%, iyo India 50%, adduunka celcelis ahaan hadda waa 48%.
Hadda xaaladdu way adkaanaysaa. Ruushka kaliya 35%ayaa tallaalay, Bahamas 34%, Koonfur Afrika 23%, Jamaica 19%iyo celceliska Afrika waa 7.7%oo keliya.
Guddiga Dalxiiska Afrika, oo uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Cuthbert Ncube, ayaa ku soo biirey hindisaha WTN ee Xudduudda Caafimaadka La'aanta laga bilaabo. Sidoo kale Dr. Taleb Rifai, Xoghayihii hore ee UNWTO.
Xoghayaha Dalxiiska Kenya Najib Balala ayaa ahaa mid ka mid ah hoggaamiyeyaashii ugu horreeyay ee Afrikaan ah oo taageera barnaamijka Hindisaha Aan Xuduudda Lahayn ee WTN. Hadda waa wasiirkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah oo ka jawaabaya dadaalka Madaxweynaha Mareykanka Biden ee ah inuu dejiyo shatiyada tallaalka COVID-19.
Ma jiro wax diidmo ah waddammada uu ku yar yahay tallaalka; waxaa jira quus ah in la helo qiyaaso ku filan si dhab ahaan loogu helo tallaalka dadka. Waxaa jira ilo dhaqaale oo aan u badalin tallaalada inta badan dalalka hodanka ah.
Hoggaamiyeyaasha dalxiiska oo leh feker caalami ah, oo uu ku jiro Wasiirka Dalxiiska Bartlett oo u dhashay Jamaica, ayaa kaalin weyn ka qaatay qirashada maqaamka iyo doorka Sacuudi Carabiya ay ku leedahay kaalin muhiim ah oo caalami ah.
Iyada oo FII -da soo socota ee Riyadh, iyo 1,000 hoggaamiye dalxiis oo diyaaraddu hadda saaran tahay si ay u tagaan Sacuudi Carabiya oo ay uga soo qaybgalaan, Wasiirka hadalka cad Bartlett ayaa laga yaabaa inuu door aad u gaar ah u yeesho hoggaamiye caalami ah Riyadh toddobaadka soo socda. Sinnaanta tallaalka ayaa laga yaabaa inay ugu sarrayso maskaxdiisa, iyadoo la tixgelinayo Dalxiiska Jamaica inuu aad u saameeyay.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka, oo uu hoggaaminayo Aasaasihii Juergen Steinmetz, ayaa tan ku aqoonsaday wada -xaajoodyadeedii caalamiga ahaa ee marxaladihii hore waxayna bilaabeen hindisaha Caafimaadka Aan Xudduudda Lahayn horraantii sannadkan si aan dunida u xusuusiyo in qofna uusan ka badbaadi doonin COVID ilaa qof walba uu badbaado.
Waxoogaa horumar ah ayaa la sameeyay laakiin nasiibdarro marxaladdan masiibada, sinnaan la'aanta tallaalka ayaa jirta, xitaa iyada oo in ka badan 6 bilyan oo tallaal ah loo qaybiyey adduunka oo dhan. Intooda badan waxay ku sugan yihiin waddamada dhaqaalahoodu sarreeyo halka waddamada ugu saboolsan ay tallaalaan wax ka yar boqolkiiba hal dadkooda.
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, oo sidoo kale kasbaday magaca a Geesiga Dalxiiska Caalamka, wuu garanayaa tan oo wuu xusuusiyey eTurboNews sinnaan la'aanta tallaalka ayaa caqabad ku noqon karta soo kabashada caalamka.
Kulanka Guddiga Dalxiiska (CITUR), Bartlett wuxuu ku wargeliyay xeeladaha dowladda Jamaica iyo dadaallada lagu yareynayo saameynta xun ee masiibada ku yeelatay waaxda dalxiiska.
Goorma Dunida Dalxiisku waxay wacdaa 911, boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa halkaas u joogtay inay ka jawaabto oo caawiso. Balaayiin doollar ayaa loo qoondeeyay in lagu maalgeliyo waaxda, kaliya maahan KSA laakiin adduunka oo dhan. Wasiirka Dalxiiska ee Sucuudiga, Mudane Mudane Axmed Aqeel Al-Khateeb, wuxuu shaqaaleeyay agaasimihii hore ee WTTC iyo Wasiirka Dalxiiska ee Mexico, Gloria Guevara, si uu u noqdo lataliye sare. Gloria waxay fahamsan tahay juqraafi ahaan waxayna si fiican ula socotaa xaaladda dhaqaalaha dalxiiska ku tiirsan, sida Kariibiyaanka.
Sacuudi Carabiya ayaa laga yaabaa inay weli isku daydo inay xarunta UNWTO ka keento Madrid ilaa Riyadh. Soo jeedinta noocan ah ee Golaha Guud ee UNWTO ee Morocco weli waa la soo gudbin karaa. Ugu yaraan, Sacuudi Carabiya waxay la xiriirtay Spain, oo hadda ah waddanka martida loo yahay ee UNWTO, si ay u wada shaqeeyaan oo hoggaanka dib ugu soo celiyaan Ururka Dalxiiska Adduunka ee naafoobay.
Machadka Maalgashiga Mustaqbalka ee soo socda ayaa isu diyaarinaya inuu ku kulmo Riyadh toddobaadka soo socda. Wasaaradda dalxiiska ee Sucuudiga ayaa ku casuuntay boqollaal hoggaamiyeyaasha dalxiiska inay qayb ka noqdaan kulankan.
Sinnaan la'aanta tallaalka adduunka ayaa dhab ahaantii khatar ku ah dib -u -furitaanka horumarka qaybta, horumarinta shaqada, iyo barwaaqada.
Socotada la tallaalay waxay u badan tahay inay doortaan goob ay shaqaalaha hoteelka iyo shaqaalaha kale ee dalxiiska sidoo kale lagu tallaalo. Isla sidaas oo kale ayay u socotaa. Shaqaalaha hoteelka waxay rabaan inay hubiyaan inay ammaan yihiin oo la tallaalay. Ma rabaan inay la falgalaan martida shisheeyaha haddii aan la tallaalin.
Haddii sababo maaliyadeed awgood waddanku uusan haysan kheyraad iyo marin u helidda tallaalka, tani waa xaalad bulshada dalxiiska ee adduunka ay isugu imaan karaan oo ay is caawin karaan. Sacuudi Carabiya waxay ciyaari kartaa doorkeeda hoggaamiye caalami ah oo dhowaan la aasaasay oo leh maskax furan oo cusub, si loo fududeeyo loona ballaariyo maalgelinta hindisahaas. Sacuudi Carabiya waxaa hubaal ah inay u soo bixi doonto geesiga adduunka haddii lagu guuleysto.
Maalgashiga noocan oo kale ah oo si siman loogu heli karo tallaallada ayaa hubaal ah inay lahaan karto dib -u -celin weyn oo Sacuudi Carabiya ah oo dhexdhexaad ah.
Sidaa darteed, kulanka FII wuxuu noqonayaa mid aad iyo aad muhiim ugu ah maalinba maalinta ka dambaysa.